Lesson 3.1 – Send status to PC via UART – EasyDevBoards
How to studyaprogramming language?
Log In & Myanmar Font
Lesson0– Prerequisites
Lesson 0.1 – What is Arduino?
Lesson 0.2 – UnoArduSim
Lesson 0.3 – Digital Electronics
Lesson 0.4 – Debugging in UnoArduSim
Lesson 0.5 – Arduino Sketches
Lesson 1 – Digital I/O
Lesson 1.1 – Blink
Lesson 1.2 – Hold-to-Light
Exercise 1.1 – Hold-to-Off
Exercise 1.2 – Automatic Water Level Control
Lesson2– Analog I/O
Lesson 2.1 – Read the Range
Lesson 2.2 – PWM for Motor Control
Lesson 2.3 – PWM for Servo
Exercise 2.1 – Analog Motor Control with Speedometer
Exercise 2.2 – Discrete Motor Control with Speedometer
Lesson3– Communication
Lesson 3.1 – Send status to PC via UART
Lesson 3.2 – Send Simple Command to Arduino
Lesson 3.3 – Command Processing with Arduino
Exercise 3.1 – Controlling I/Os with Serial Command
Lesson4– Miscellaneous
Lesson 4.1 – Tone Generator
Exercise 4.1 – Tone Keyboard
How to download AT-Command Firmware to ESP8266 Module?
dBm-mW Conversion Calculator
PCB Impedance Calculator (MicroStrip)
PCB Impedance Calculator (Stripline)
Zigbee Communication Basic
Home / Arduino / Training / Lessons / Lesson3– Communication / Lesson 3.1 – Send status to PC via UART
Arduino ကို ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးပဲ Hardware နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် Debug လုပ်လို့ မရတဲ့အတွက် အထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ခလုတ်တစ်ခုနဲ့ LED တစ်လုံးနဲ့ကို Input / Output တွေမှာ ချိတ်ပြီး ခလုတ်နှိတ်ရင် မီးလုံးလင်းတာ စမ်းကြည့်နေတယ် ဆိုပါစို့။ Error တစ်ခုတက်ပြီး ခလုတ်နှိပ်ပေမယ့် မီးမလင်းရင် ဘာဖြစ်နေလဲ သိဖို့ ခက်ပါတယ်။ ခလုတ်နှိပ်ရင် 1 ရရမယ့်ဟာပဲ မရတာလား၊ ရေးထားတဲ့ logic ပဲ မှားတာလားဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် Arduino မှာ ကွန်ပျူတာကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ အကြောင်းပြန်နိုင်မယ့် Serial လို့ ခေါ်တဲ့ Serial / UART communication library ကို ထည့်ထားပေးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ USB cable ကိုပဲ Serial Port (COM port) အဖြစ် သုံးပြီး data တွေ ပို့ပေးတာပါ။ UnoArduSim မှာလည်း ဒီ UART port ကို simulate လုပ်ပြီး သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါကို ဒီသင်ခန်းစာမှာ စမ်းကြည့်ရအောင်။
Lab Bench Pane ပေါ်မှာ 1 Push Button, 1 Analog Slider နဲ့ USB Serial ကို တင်လိုက်ပါ။ USB Serial ကိုတော့ Configure -> I/O Devices menu ထဲကနေပဲ USB Serial ဆိုတဲ့ checkbox လေးကို click လုပ်ပြီး တင်ရပါမယ်။
UART ကို သုံးဖို့ setup( ) မှာ Serial.begin( 9600 ) ဆိုပြီး ရေးရပါမယ်။ 9600 ကတော့ Baud Rate လို့ ခေါ်တဲ့ data ပို့တဲ့ အမြန်နှုန်းပါ။ Baud Rate များလေ၊ မြန်လေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ နံပါတ် ထည့်လို့ မရပါဘူး။ သူ့မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Baud Rate တွေ ရှိပါတယ်။ Arduino ကနေ Computer ကို ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင် နှစ်နေရာလုံးက တူညီတဲ့ Baud Rate သုံးမှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Data တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ရပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Default value ဖြစ်တဲ့ 9600 ကိုပဲ သုံးပါမယ်။
Data ပို့ဖို့အတွက် loop( ) မှာ Serial.print( ) နဲ့ Serial.println( ) ကို သုံးပြီး ပို့ပါမယ်။ print( ) ကို သုံးရင် ပထမ ပို့လိုက်တဲ့ data နဲ့ ဆက်တိုက်ပို့မှာ ဖြစ်ပြီး println( ) ဆိုရင်တော့ ထည့်ပေးတဲ့ data ရဲ့ နောက်မှာ စာကြောင်းအသစ်ပြောင်းစေတဲ့ New Line character ပါ ထည့်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Code ကို ရေးပြီး run လိုက်ရင် Lab Bench Pane က SERIAL ရဲ့ အောက်ဖက်က text box မှာ စာတွေ လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ပြနေတာကို မြင်ရပါမယ်။ သေချာမြင်ရဖို့ SERIAL ရဲ့ ခရမ်းရောင် ရှိတဲ့ တစ်နေရာရာကို double-click လုပ်လိုက်ပါ။ Serial Monitor ဆိုတာ ပေါ်လာပြီး ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ data ကို သေချာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ခလုတ်ကို နှိပ်ကြည့်၊ Analog Slider ကို ရွှေ့ကြည့်ပြီး data တွေ ပြောင်းသွားတာကို စမ်းကြည့်ပါ။
Dot Product ဘယ္မွာ သုံးၾကမွာလဲ။
Math: Dot Product ဘယ်မှာ သုံးကြမှာလဲ?
First Global Robotic Information
Transformerless Power Supply Problems
Categories Select Category Android Arduino Electronics EMC Math MATH news PCB RPI Training Uncategorized Wireless
Lesson 3.2 - Decision Making
Part of: Basics of C Programming
Lesson 3.1 - Logical and Comparison Operators
Assignment 2.1 - F to C Program
© EasyDevBoards 2018